असार १४, २०७९ १०:०८:१७
झोलाको इतिहास र डिबीको कथा यो किराँतीले सबैलाई सुनाउन सक्दैन
जेठ २६, २०७७ गार्डेन राई
केही वर्ष अगाडिको कुरा हो, सोलु एफएममा पेटको सारंगी नामक नाटक प्रसारण हुन्थ्यो । उक्त नाटकको लेखक तथा निर्देशक डिबी किराँती नै हुनुुहुन्थ्यो । र हामी पनि त्यस नाटकका पात्र भएर नाटक रेकर्ड गर्थ्याैं । त्यही क्रममा मैले एकदिन उहाँलाई सोधेँ, 'अंकल यो झोलाभित्र के बोक्नुहुन्छ नि ?'
उहाँले हाँस्दै हाँस्नुभयो, 'तँ मात्र होइन, मलाई यो प्रश्न धेरै जनाले गरेका छन् । कुनै बेला फुर्सद भएछ भने सुनाउँछु ।'
मैले फेरि भन्नका लागि आग्रह गरेँ । उहाँले जिस्कँदै भन्नुभयो- 'एउटा अनौठो चरो बोकेको छु ।’
सायद, फागुन महिनामा होला, उहाँ बिरामी भएर काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ । सोही क्रममा उहाँसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ । लामो कुराकानी भएका कारण मैले धेरै अगाडिदेखिको मेरो जिज्ञासा पूरा हुने आशा गरेँ । अरु कुराहरु हुँदै थियो, तर मैले अरु कुरालाई अलि मोडेर सोधेँ- 'अंकल तपाईले फुर्सद भएको बेला झोलाको कहानी सुनाउँछु भन्नुभएको थियो नि...'
हाँस्दै भन्नुभयो, 'अझै बिर्सेको छैनस् ?'
उहाँ आफ्नो झोलाको कहानी यसरी सुनाउनुहुन्छ ...
सोमवार, जेठ २६, २०७७, ०८:०६:००
गाउंमा लैनो भैसी हुने काकीले खिर खान भ्याईनन् रे ,शहरमा भैसीनै नहुनेहरुको कत्रो रौनक ?
साहित्यकार डिबी किरातीको नाटक सँग्रह “काँ जाँन्छौ तन्नेरी“ बिमोचन(भिडियो सहित) साहित्यकार डिबी किरातीको नाटक सँग्रह “काँ जाँन्छौ तन्नेरी“ बिमोचन
जेठ २५, २०७६ गार्डेन राई
बैशाख २८, २०७६ गार्डेन राई